काठमाडौँ । साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त ठानिएका चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’लाई गृह मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको २०७४ चैत २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र संगठित अपराध ऐन २०७० को दफा १२ अनुसार सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित विशेष अनुसन्धान टोलीले गोरेलाई पक्राउ गरी पत्रकार सम्मेलनमार्फत आज सार्वजनिक गरेको हो । साढे ३३ किलो सुनका मुख्य अभियुक्त गोरे फरार भएपछि नेपाल र छिमेकी मुलुक भारतमा गरिएको अनुसन्धानबाट उनी काठमाडौँ आएको सूचनाका आधारमा आज बिहान ५ः३४ मा काठमाडौँ महानगरपालिका– ८ गौरीघाटबाट पक्राउ गरिएको संयोजक पौडेलले जानकारी दिए ।
यसअघि भारतबाट पक्राउ गरिएको भनिए पनि अनुसन्धान टोलीले गौरीघाटबाट पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको छ । यस प्रकरणमा विसं २०७५ वैशाख १९ गते मोरङ जिल्ला अदालतमा ६५ जनाको नाममा मुद्दा दर्ता गरिएकामा ३२ जनालाई अदालतमा उपस्थिति गराइ सकिएको र अरु ३३ जना अहिलेसम्म पनि फरार रहेका छन् । यतिबेला “गोरेलाई चाँडोभन्दा चाँडो” मोरङ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउने तयारी गरीएको छ।
सुन काण्डका मुख्य अभियुक्त गोरे समातिएकाले गोरेसँगको बयानबाट थप अनुुसन्धान गर्न सजिलो हुने पक्का छ ।
के हो सुन काण्ड ?
माघ अन्तिम साता युएइबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै आएको तस्करीको साढे ३३ केजी सुन सम्बन्धित व्यक्तिसम्म नपुगी गायव भयो । सुन तस्करीमा संलग्न मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्यासँगै त्यो सुन हराएको पुष्टि भयो ।
घटनालाई लुकाउन प्रहरीले भूमिका खेलेको भन्दै छानबिनका क्रममा पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गोविन्द निरौला, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिवेश लोहनी, प्रहरी उपरीक्षक विकासराज खनाल, प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रजित केसी, प्रहरी नायब निरीक्षक बालकृष्ण सञ्जेल पक्राउ परिसकेका छन् ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्याम खत्री अझै फरार छन् । सुन काण्डका अभियुक्तमाथि जिल्ला अदालत मोरङमा बहस भइरहेको छ ।
को हुन् गोरे ? यस्तो छ, उनको बिगत:
पछिल्लो समयको निकै चर्चित काण्ड साढे ३३ किलो सुन प्रकरणका मुख्य अभियुक्त भनिएका चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका ७ स्थायी वासिन्दा हुन्। अन्दाजी ३६/३७ वर्षका उनको काठमाडौँको गौरीघाटमा समेत घर रहेको छ। गोरेको उपनामले चिनिने चुडामणीलाई आजभोली ‘सुन डन’ पनि भन्ने गरिन्छ।
अहिले सम्म ३८ क्वीनटल सुन तस्कर गरिसकेका भिनिएका गोरे कुनैबेलाका चर्चित फुटबलर समेत हुन्। उनले थुप्रै राष्ट्रिय स्तरका क्लव गेम खेलिसकेका छन्। उनी मोरङ ११ लगायत विभिन्न अन्य क्लबबाट फुटबल खेलिसकेका खेलाडी पनि हुन्। त्यसबेला उनलाई उनको खेलबाट प्रभावित भएर जाउलाखेल युथ क्लबले समेत खेल्न अफर गरेको थियो। तर उनलाई मोरङ ११ ले गुमाउन चाहेन।
त्यसपछि फुटबल खेल्न छाडेर उनी भारतीय सेनामा पनि भर्ना भए । सेनाको ३ महिना मात्र तालिम गरेका उनी भागेर दुबई पुगे। त्यहाँ उनी पुन दुबई प्रहरीमा भर्ना भएर काम गर्न थाले । राम्रो उचाई बलिष्ट शरिर अनि खेलाडी भएकै कारण उनलाई उनलाई भर्ती हुन गार्हो भएन।
उनका बारेमा जानकार व्यक्तिका अनुसार पाँच वर्ष दुवई का गोरेले त्यहाँ रहँदा देखिनै सुन कारोबारमा संलगन हुन् थालेका थिए। उनले दुबईबाट नेपाल सुन पठाउने र हुण्डी कारोवार पनि सञ्चालन गरेका थिए। पछी नेपाल आएर फेरी दुवई, सिंगापुर लगायतका देशकाबाट नेपाल पठाईएका तस्करीका हुन्स देशका विभिन्न स्थानमा स्पलाई गर्ने काम गर्ने थालेका थिए।
यसअघि पनि धेरै पटक सुन तस्करीको काण्डमा तानिए पनि गोरे राम्रो प्रहरी उच्च अधिकारीसँगको हिमचिमका कारण पटक पटक उम्कन सफल भएका थिए। उनले उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीको चिनजानको फाइदा उठाऊदै आफ्नो धन्दा चलाउदै आएका थिए।
तर, यसपटक भने ३३ तस्करीको सुन हराएपछि जब सनम शाक्यको हत्या भयो तब यो घटनाले विकराल रुप लियो अनि आज पक्राउ परे गोरे पनि।
प्रकाशित : मङ्गलबार, जेठ ०८, २०७५१६:१८
बढ्यो सुनचाँदीको मुल्य, यस्तो छ आजको भाउ!